छोरीको जीवनको लागि बुवाको चित्कार – लोकल खबर अनलाईन
छोरीको जीवनको लागि बुवाको चित्कार
Posted by: Local Khabar in लोकल खबर, समाचार November 1, 2017	69 Comments 524 Views
खर्च छैन, कसरी बचाऊ मेरी छोरी ?
बिरेन्द्रकुमार साह । मोरङ
बिराटनगरको लाईफगार्ड अस्पतालमा आफ्नो गरीवी र रोगसँग लड्दै छिन् रंगेली नगरपालिका वडा नम्वर ३ की ६ वर्षीय जशना कर्मकार ।
मृगौलामा समस्या देखिएपछि केहिदिन अगाडि बुवा मनोज कर्माकारले उपचारका लागि उनलाई कोशी अञ्चल अस्पतालमा भर्ना गराएका थिए । तर, दुखमाथि अर्को पीडा बर्सियो । त्यहाँका डाक्टरहरुले त्यो सरकारी अस्पताल उपचार हुन नसक्ने भन्दै अर्को निजी अस्पतालमा रिफर गरिदिए । आर्थिक अवस्था एकदम नाजुक रहेको जशनाको थप उपचारका लागि त्यसपछि उनको बुवाले बिराटनगर बरगाँछीमा रहेको निजी अस्पताल लाईफगार्ड अस्पतालमा लगे ।
पहिले मृगौलामा मात्र समस्या देखिएको थियो, अहिले फोक्सोमा पनि समस्या देखिएको छ । निमोनिया समेत देखा परेको छ । जशनाको बुवाले भने, मेरो छोरीलाई उपचार गराउनका लागि मसँग खर्च छैन, कसरी बचाऊ मेरी छोरी ? लौं न सहयोग गरिदिनुहोस् ।
पैसाको अभावमा जशना जीवन र मृत्युको सघारमा छिन, उनको बुवा भने आखाँभरि आँशु बनाएर छट्पटाईरहेका छन् । गरिबी र लाचारिताले थिचेको छ ।
उनले हात जोड्दै आफ्नी छोरीको जीवन बचाईदिनका लागि याचना गरेकी छिन् ।
लागि यो नंम्वरमा सिधा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ । सम्पर्क नंम्वरहरु: 9804055265,9817341379
बिरेन्द्रकुमार साह । मोरङ बिराटनगरको लाईफगार्ड अस्पतालमा आफ्नो गरीवी र रोगसँग लड्दै छिन् रंगेली नगरपालिका वडा नम्वर ३ की ६ वर्षीय जशना कर्मकार । मृगौलामा समस्या देखिएपछि केहिदिन अगाडि बुवा मनोज कर्माकारले उपचारका लागि उनलाई कोशी अञ्चल अस्पतालमा भर्ना गराएका थिए । तर, दुखमाथि अर्को पीडा बर्सियो । त्यहाँका डाक्टरहरुले त्यो सरकारी अस्पताल उपचार हुन नसक्ने भन्दै अर्को निजी अस्पतालमा रिफर गरिदिए । आर्थिक अवस्था एकदम नाजुक रहेको जशनाको थप उपचारका लागि त्यसपछि उनको बुवाले बिराटनगर बरगाँछीमा रहेको निजी अस्पताल लाईफगार्ड अस्पतालमा लगे । पहिले मृगौलामा मात्र समस्या देखिएको&hellip;
Biratnagar बिराटनगर मोरङ	2017-11-01
Tagged with: Biratnagar बिराटनगर मोरङ
Previous: मुटु रोगीलाई गन्तव्य नेपालको सहयोग (नमूना घरहरु निर्माण)
Next: दिलमा ताला लाईदिए (अरेन्द्र गुरूङ)